राजेन्द्र लिङ्देनले चुनाव जितेपछि हिमानी शाह भाइरल, के गरिन त्यस्तो ? — Sanchar Kendra
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देन विजयी भएपछि निर्मल निवासमा खुशीयाली छाएको छ । अध्यक्ष कमल थापालाई हराउँदै लिङ्देन विजयी भएपछि पूर्वराज ज्ञानेन्द्र शाह निवासमा खुशीयाली छाएको हो ।
यसको खुशी पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहले सामाजिक संचालमा पोखेकी छन् । पूर्वयुवराज्ञी शाहले राजेन्द्र लिङ्देनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष पदमा विजयी भएकोमा बधाई तथा शुभकामना दिएकी छिन् ।
राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य, महामन्त्री लगायत जिम्मेवारी सम्हालिसकेका ५६ वर्षीय लिङ्देनले २०० मतले आफ्ना प्रतिस्पर्धी तथा लामो समय अध्यक्ष रहँदै आएका कमल थापालाई पराजित गरेपछि बधाई दिएकी हुन् ।
हिमानीले अवसरवाद अन्त्य गर्न सफल राष्ट्रवादी नेता भएको जनाउँदै सामाजिक सञ्जाल मार्फत् शुभकामना दिएकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘अवसरवाद, नातावाद, कृपावादको अन्त्य गर्न सफल हुनु भएकोमा राष्ट्रवादी नेता राजेन्द्र लिङ्देन लाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना’
उनले अगाडि लेखेकी छन्, ‘राजेन्द्र लिङ्देन को जित सङ्गै मुलुकले आज सच्चा राष्ट्वादी नेता पाउन सफल भएको छ …!’ यता, कमल थापाले आफूलाई निर्मल निवासले हराएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । थापाको असन्तुष्टि र हिमानीको बधाईले कहिँन कहिं पूर्वराज परिवारको स्वार्थ केखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
‘सिङ्गो मुलुक गणतन्त्रमय भएको बेला शिरमा कफन बाँधेर २०६३ साल देखि राजसंस्था बोकेर हिँडेको पुरस्कार आज पाइयो ।’ थापाले भनेका छन् । ‘सो एजेण्डाको मूल संवाहकलाई राजनीतिकरुपमा समाप्त पार्न गरिएको चेष्टाले राजाको भलो होस्। हार्दिक शुभ–कामना।,’ उनको भनाइ छ ।
कमल थापा र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको त्यो गोप्य भेट
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले यतिबेला आफूविरुद्ध ‘निर्मलनिवासले खेलेको’ गुनासो गरिरहेका छन् । राप्रपाको महाधिवेशन शुरु हुनुअघि नै रातोपाटीलाई लिएको अन्तरवार्तामा उनले ‘निर्मल निवासले नखेलोस्’ भनेर सचेत गराइसकेका थिए । महाधिवेशनपछि प्रश्न उठेको छ, आखिर राप्रपामा निर्मल निवासले खेलेकै हो त ?
राप्रपामा निर्मल निवासले खेलेको विषयमा चर्चा गर्नुअघि राप्रपाको महाधिवेशन शुरु नहुँदै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र राप्रपा नेता कमल थापाबीच भएको भेटवार्ताको चर्चा गरौं । ज्ञानेन्द्र र कमल थापाबीच दुरी बढेको पनि सोही भेटवार्तापछि हो ।
स्रोतका अनुसार पूर्वराजा र थापाबीच भएको सो भेट अहिलेसम्म गोप्य नै रहेको छ । केवल राप्रपाका नेताहरुबीच मात्रै सो भेटको गाइँगुइँ हल्ला चलेको थियो । उक्त भेट निकै लामो भएको र राजनीतिक विषयमा केन्द्रित थियो । तथापि सो भेटबारे कमल थापाले औपचारिकरुपमा कसैलाई खुलेर बताउने गरेका छैनन् ।
उच्च स्रोतका अनुसार सो भेटमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा जनतामा आकर्षण बढ्दै गइरहेको भन्दै अब राप्रपाले सडक आन्दोलन र विद्रोहको तयारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, थापाले भने त्यसरी सडकमा जुलुस निकालेर मात्रै राजतन्त्र फर्कन नसक्ने धारणा राखेका थिए ।
नेता थापाले पूर्वराजासमक्ष वर्तमान संविधानको पक्षमा समेत वकालत गरेका थिए । यो संविधानले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई अपरिवर्तनीय नभनेको हुनाले राप्रपाले बहुमत ल्याएर संवैधानिक बाटोबाटै राजतन्त्र फर्काउन सकिने थापाले बताएपछि पूर्वराजाले त्यो कहिले हुन्छ ? भन्दै गद्दीमा चाँडै फर्कने चाहना प्रकट गरेका थिए ।
तर, थापाले चाहिँ कसैको व्यक्तिगत इच्छाले मात्रै राजतन्त्र नर्फने, यसका लागि वस्तुगत परिस्थिति तयार हुनुपर्ने बताएका थिए । राप्रपा ठूलो दल बन्यो र काठमाडौंमा एकलाख मानिस उतार्न सकियो भने बल्ल राजतन्त्र फर्कन सक्ने थापाले अडान राखेका थिए ।
चाँडै राजतन्त्र फर्कन सक्दैन भन्ने थापाको तर्क सुनेपछि पूर्र्वराजा त्यहीँबाट रिसाएको स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो । थापाले चाहिँ ज्ञानेन्द्रसँगको भेटपटि आफू निकटस्थहरुलाई भन्ने गरेका छन्, ‘उमेरका कारणले हो कि किन हो, राजालाई चाँडो राजगद्दीमा बस्न मन लागेछ, वस्तुगत परिस्थिति नबनेसम्म सडक आन्दोलनबाट राजतन्त्र फर्कन सक्दैन, यसका लागि समय लाग्छ ।’
त्यसो त छँदाखाँदाको राजतन्त्र अन्त्य हुनुमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको अदुरदर्शिताले पनि भूमिका खेलेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताउने गरेका छन् । ०५९ साल असोज १८ उनले आफ्नो हातमा शक्ति लिने उद्देश्यले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई अपदस्थ गरे । पछि ०६१ माघ १९ गते लोकतन्त्र नै अपदस्त गरेर शाही शासन लाद्ने काम गरे र आफैं मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बने ।
शाहले यसरी शासनको भोक नदेखाई वीरेन्द्रले जस्तै संवैधानिक भएर बसेको भए शायद गणतन्त्र यति छिटै आउने थिएन कि ? तर, सक्रिय हुने नाममा ज्ञानेन्द्रले ०४७ को संविधान कुल्चने काम गरेपछि राजतन्त्रको दुःखका दिन त्यहीँबाट शुरु भए ।
गणतन्त्र आइसकेपछि पनि पूर्वराजाले पटक–पटक गद्दीमा फर्कने. आशा र अपेक्षा राख्दै आएका छन् । यद्यपि भावी राजाका रुपमा हेरिएका पारस साहलाई देखेर मानिसहरु राजतन्त्रप्रति खासै आकर्षित छैनन् । तथापि यस्तो बेलामा पूर्वराजाले राजावादी पार्टी राप्रपालाई एकतावद्ध बनाउनुपर्ने र शक्ति आर्जन गर्नुपर्नेमा पटक–पटक राप्रपालाई भुटाउने भूमिका खेल्दै आएका छन् ।
०७४ को चुनावअघि राप्रपाका तीनवटै समूहबीच एकता भएको थियो । तर, राप्रपालाई दरबारले नै फुटाएर कमजोर बनाएको आरोप राप्रपा नेताहरुले लगाउने गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, राप्रपा नेपाललाई समेत दरबारले फुटाउने प्रयास गरेको गुनासो स्वयं कमल थापाले गर्दै आएका छन् ।
यहीबीचमा अहिले फेरि पूर्वराजाले राप्रपामा कमल थापाविरुद्ध गठबन्धन बनाएर फुटको प्रयास गरेको कमल थापा पक्षको आरोप छ । तर, राप्रपालाई बलियो बनाउनुको साटो फुटाउने र एकतावद्ध हुनै नदिने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको अदुरदर्शिताकै कारण उनको जुनीभरि नै राजतन्त्र नफर्किने संकेत देखिएको थापा निकट नेताहरुले विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।
राप्रपाका एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘ज्ञानेन्द्र र कमल थापाबीचको त्यही भेट अब उहाँहरुको अन्तिम भेट पनि हुन सक्छ । किनभने, जसले अहिलेसम्म ज्ञानेन्द्रको पक्षमा लडेर यहाँसम्म आयो, उसैलाई सिध्याउने षड्यन्त्र पूर्वराजाबाट भएपछि यो भन्दा ठूलो धोका र गद्दारी अर्को के हुन्छ ? जसका लागि कटेरो बनायो, उसैको पुच्छर बाहिर !’